को ह्याकर जुलियन असान्ज लण्डन पक्राउ | Apg29
को ह्याकर जुलियन असान्ज लण्डन पक्राउ
बनाउने समाप्त गर्न न्याय समय। को ह्याकर र Wikilleaks संस्थापक जुलियन असान्ज ब्रिटिश प्रहरी द्वारा लन्डन पक्राउ गरिएको छ इक्वेडर आफ्नो राजनीतिक शरण फिर्ता लिया छ तब देखि।
जुलियन असान्ज बस्ने भएको सात वर्ष छ को इक्वेडोरेली दूतावास उहाँले 2012 मा देशमा शरण प्रदान गरिएको थियो देखि लण्डन।
को गिरफ्तारी अब संयुक्त राज्य अमेरिका बाँकी सकिन्छ जो Assange लागि डरलाग्दो सपना छ। अमेरिकामा उहाँले गोप्य कागजातहरू वितरण को एक अपराध को आशङ्का गरिएको छ।
स्वीडेन मा बलात्कार को आरोप
जुलियन असान्ज स्वीडेन मा बलात्कार को आरोप छ, तर छानबिन 2017 मा बन्द भएको थियो।
यो जुलियन असान्ज बलात्कार को शङ्काको मा एक स्विडिस अदालतले अनुपस्थिति मा पक्राउ गरिएको थियो कि 2010 मा भएको थियो।
उहाँले लेक्चर, को विषय मा स्टकहोम मा छ LO महल सहित दिन स्वीडेन मा भएको थियो "युद्ध को पहिले हताहत सत्य हो।" स्वीडेन गर्न भ्रमणको जडानमा बलात्कार र दुई महिला यौन आक्रमण, केही को Assange रिपोर्ट थियो एक्सप्रेस प्रकट गर्न पहिलो थियो।
Assange शुल्क अस्वीकार तर उहाँले स्वीडेन संयुक्त राज्य अमेरिका उसलाई हात भनेर मानिसहरू डराउँदैनन् किनभने, सोधपुछ लागि देखा पर्न इन्कार गरे। डिसेम्बर 2010 मा उहाँले ब्रिटिश प्रहरी पक्राउ गरिएको थियो तर अदालत जमानत मा उहाँलाई जारी गर्ने निर्णय गरे।
जहाँ उहाँले देखि रहते छ - जुन मा, दुई वर्ष पछि, उहाँले राजनीतिक शरण लागि लण्डन इक्वेडर गरेको दूतावासमा लागू गरियो।
येशूले मानिसहरूलाई मुक्त सेट
सबै भन्दा राम्रो कुरा अहिले WikiLeaks संस्थापक जुलियन असान्ज येशूलाई भागिरहेका छ। यो दूतावास काम गरेन। बरु, यो संस्थापक लागि जेलमा भएको छ, तर येशूले मुक्त मान्छे सेट!
Vecka 30, onsdag 24 juli 2019 kl. 10:38